ပြုံးရင်လှမှာလား – ကိုမျိုး (မြန်မာစာ) | PoemsCorner
ပြုံးရင်လှမှာလား – ကိုမျိုး (မြန်မာစာ)
မေး(လ်)ထဲ တွေ့လိုက်ရတာလေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကာလ အတွင်း။
အမေစုနဲ့ ကပ်ကင်းဘဲလ် တွေ့ဆုံအပြီးမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် အမေစုဆီက အပြုံး တခုတောင်းလိုက်တဲ့ သတင်းထောက် တယောက်ကို အမေစုက ပြန်မေးလိုက်တဲ့ ‘ပြုံးရင်လှမှာလား’ဆိုတဲ့စကားကို ‘ကိုမျိုး(မြန်မာစာ)’ က ခံစားထားတာလို့ ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီ့က စလို့အပြုံးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ပြန်အမှတ်ရခဲ့တယ်။
အပြုံးဆိုတာလည်း မေ့သွားလောက်ရဲ့မဟုတ်လား အမေ။
လောကသဘာဝကိုက ပြုံးရင်တော့လှမှာပါပဲ အမေ။
သားတို့ကြုံရ လူမှုဒုက္ခက ဘာပိုမှာလဲ
သွေးချင်းနီးသလိုနဲ့ ဝေးနေသူတွေလည်း ပြန်နားလည်စေချင်ပါရဲ့
အမေယုံကြည်တဲ့ အပြုံးပန်း ထာဝစဉ်အစွမ်းကုန် လန်းနိုင်မှာပါ
အမေ ဖွေရှာတွေ့ရှိလိုက်တဲ့ အမှန်တရားဖြစ်ပါစေ။
၂၀၁၂ နှစ်သစ်ကို။ ။
In: ကဗျာ Posted By: kantkawmg Date: Dec 29, 2011
မင်း ထွက်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့ အခါ
Bill Gates ကိုမှ အားကျသူ
” မေခ၊မလိခ ကိုမှ ကျောခိုင်းချင်တဲ့ ဧရာဝတီ “
မြန်မာစာ၊ မော်ဒန် ဆိုသော ကဗျာအချို့၊ ခံစားမှု နှင့် ဖန်တီးသူလိုင်စင်
Leave comment5Comments & 611 views
pyone tine dot ma hla naing par bu naw.
ma chi pyone,,,,maema tar pyone,,aunt tet tet pyone,,,mar yar pyone,,,,a myar g shi tay de.
dar taung ma ti dot loh………he,,he,,
chit de myat si ne kyi yin dotakone hla de,
wet chan tway shi le hla de,,,,,,,,,,
pain le hla de,,,,,,,,,,
wa le hla de,,,,,,
pu le hla de,,,,
bar phyit phyit hla de,,,,
By: ei lay at Dec 29, 2011
By: X - ray at Dec 30, 2011
အမေ ပြုံး…..တိုင်း…တကယ်ကို..လှပ ပါတယ်..
By: အသဲကွဲမိုး at Jan 9, 2012
အမေနဲ့ ကပ်ကင်းဘဲလ် တွေ့ဆုံအပြီးသတင်းထောက်တွေဓါတ်ပုံဝိုင်းရိုက်စဉ်
အမေ့ထံက အပြုံး တခုတောင်းလိုက်တဲ့ သတင်းထောက် ကိုခင်မောင်ဝင်းAPကို‘ပြုံးရင်လှမှာလား’ ပြန်မေးပြီးပြုံးပြလိုက်တဲ့အကြောင်း
APမှာအစ်မကြီးဒေါ်အေးဝင်းက သတင်းရေးခဲ့ ဖူးပါတယ် ။အမေရွေးကောက်ပွဲ
၀င်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချိန်မှာသွေးချင်းနီးရက်နဲ့ ဝေးတော့မလိုဖြစ်ကြသူတွေ၊
အမေ..ပြောဖူးတဲ့ပြုံးရင်လှမှာလားဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အမေ့ အတွက်
နှစ်သစ်ကြိုအပြုံးကဗျာရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ..ခုတော့ အမေ့ အပြုံးကတစ်ဆင့်
By: Ko Myo at Apr 4, 2012
အခုလို သေသေချာချာ ပြောပြတာ ကျေးဇူးပါပဲ ကိုမျိုး။ ကိုမျိုးပြောသလို ‘တကမ္ဘာ လုံးတောင် ပြုံးကြရပါပြီ’။
‘ဒေါ်စု အပြုံး’ ကမ္ဘာကိုတောင် ဖုံးပါတယ်။
ဒီကဗျာလေး ဖတ်ရတုန်းက လှလွန်းလို့သိပ်ကြိုက်သွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တခြားရေးဖော် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကိုပါ ခံစားစေလိုတဲ့ စေတနာသက်သက်နဲ့ မျှဝေလိုက်တာပါ။ ကိုမျိုးဆီ ဘယ်လို ခွင့်တောင်းရမှန်းလဲ မသိဘူးလေ။ ကိုမျိုး နားလည်ခွင့်ပြုပါလို့ တဆက်တည်းမှာပဲ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
By: ကံ့ကော်မောင် at Apr 10, 2012